ချစ်ရတဲ့ကောင်မလေးသို့………. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanmar Gazette » ချစ်ရတဲ့ကောင်မလေးသို့……….
Posted by bluerose on May 30, 2012 in Myanmar Gazette |7comments
ငါနင့်ကိုချစ်နေတဲ့အချိန်မှာ ငါဆိုတဲ့လူတယောက် ကမ္ဘာမြေပေါ်မှာရှိနေမှန်းတောင် နင်မသိပါဘူး ငါနင့်ကိုလွမ်းနေတဲ့အချိန်တိုင်းမှာ နင်ကတယောက်သောသူကို လွမ်းဆွတ်နေခဲ့တယ်နော် ငါ့ဘက်ကတော့ကံကြမ္မာက မတရားဘူးလို့ပဲပြောရမလား ငါ့ဘက်မှာကံတရားကရှိမနေဘူးလို့ပဲပြောရမလား နင်ငါ့ရှေ့ရောက်လာတိုင်း ပြောတတ်တဲ့စကားလုံးလေးတွေ ပြုံးတတ်တဲ့နင့်အပြုံးလေးတွေ လူတိုင်းကိုကြင်နာစွာနဲ့ ဆက်ဆံတတ်တဲ့နင့်အကြည့်လေးတွေ နင့်ချစ်သူအပေါ်မှာ ကလေးတယောက်လို ဂျီကျတတ်တဲ့နင့်အကျင့်လေးတွေ အားလုံးကိုငါအမှတ်ရမိလို့ နေပါတယ်ကောင်မလေးရေ…. ငါမျှော်လင့်မိပါတယ် တနေ့နေ့တချိန်ချိန်ကျရင် နင်နဲ့အနီးဆုံးနေရာမှာ ငါရှိနေပါရစေလို့လဲ နင့်အကြောင်းလေးတွေလည်း ငါ့ဒိုင်ယာရီစာအုပ်ထဲမှာ နေရာယူတာပြည့်လို့နေခဲ့ပြီ ဘုရားရှိခိုးတိုင်းလည်း ဆုတောင်းမိပါရဲ့ ကောင်မလေးရေ…. လူတွေငါ့ကိုကဲ့ရဲ့ပေမယ့်ငါဝမ်းမနည်းပါဘူး လူတိုင်းမှာကိုယ်စီလွတ်လပ်စွာ ချစ်ပိုင်ခွင့်ရှိကြပါတယ်လေ ငါလည်းနင့်ကိုလွတ်လပ်စွာ ချစ်ပိုင်ခွင့်ရှိနေပါတယ်နော် ကောင်မလေးရေ….. ငါနင့်ကိုအရမ်းလွမ်းနေတယ် ငါနင့်ကိုအရမ်းချစ်နေတယ် ငါနင့်ကိုအရမ်းတွေ့ချင်နေတယ် ခုချိန်မှာငါနင်နဲ့အနီးဆုံးနေရာမှာ ရှိနေခွင့်ရမယ်ဆိုရင်တောင် မဖြစ်နိုင်တော့ပြီမို့ ငါ့ဘဝငါ့နှလုံးသားငါ့ခံစားချက်တွေ အားလုံးဟာငါနဲ့အတူ ရုပ်ဒြပ်မရှိတဲ့ လေထုထဲမှာ မျောလွင့်လို့နေခဲ့ပြီလေ နောက်ဘဝဆိုတာများ ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ ကောင်မလေးရေ ငါဆုတောင်းခဲ့ပါတယ် ထာဝရမင်းဘေးမှာ မင်းစိတ်တိုင်းကျ မင်းအလိုကျ မင်းစိတ်ချမ်းသာအောင် ထားနိုင်မယ့်ချစ်သူတယောက်ဖြစ်ရပါစေလို့ ငါဆုတောင်းခဲ့ပါတယ် ကောင်မလေးရေ……….
bluerose လေးရေ …. လူတိုင်း လူတိုင်းကတော့ ကိုယ့်ချစ်သူအပေါ်မှာ အကောင်းဆုံးဆိုတာတွေ ဖြည့်ဆည်းပေးချင်တယ် ၊ ဦးစားပေးချင်တယ် ၊ စိတ်ချမ်းသာမှုပေးချင်တာ ချစ်ရသူတစ်ယောက်ရဲ့ သဘာဝလို့ပဲ ခေါ်ရမလား ….. ။
ဒါပေမယ့်ပေါ့လေ ……တကယ့်ဘ၀မှာ အမြဲတစေဆုံရပြန်တော့လည်း …. မထင်မှတ်ထားတဲ့ စိတ်တွေလည်း ပြောင်းသွားတတ်တယ် … ။ စကားများတာ ၊ ရန်ဖြစ်တာကစလို့ ၊ လက်လွန်ခြေလွန် နပန်းလုံးတဲ့ အထိလည်း ဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ် ။ အဲ့ဒီအချိန်ကျလျှင်လေ … အရင်က ခံစားချက်တွေ .. ဘယ်များပျောက်သွားပါလိ့မ်လို့ ပြန်တွေးယူရတဲ့ အဖြစ်ပါပဲ … ။ အရင်တုန်းက ခံစားချက်တွေရှိခဲ့တာ .. ကိုယ်မှ ဟုတ်ရဲ့ လားလို့တောင် သံသယ၀င်ရတဲ့ အဖြစ်မျိုးပဲ … ။ အဲ့ဒီစိတ်ကို ဘယ်လိုနားလည်ရမလဲတောင်မသိတော့ဘူး …. ကိုယ့်အတ္တတွေပဲ များနေလို့ ထင်ပါရဲ့ … အခုလတ်တလော ကျွန်မကိုယ်တိုင်လည်း အဲ့ဒီလိုချည်း ခံစားနေရတယ် … မတွေ့လျှင်တော့ .. ဟာတာတာဖြစ်နေပေမယ့် … ၊ အသံကြားလျှင်တောင် နားညီးသလိုလို ၊ ခေါင်းကိုက်သလိုလို ၊ ပါးစပ်ကို တိပ်နဲ့ ပြေးကပ်ချင်သလိုလိုကြီး… ဟီးဟီး … ။:mrgreen:
အဟီးဟီး … ချစ်ချစ်ရေ … ဂယ်ပြောဒါဟုတ်ဘူးနော် … ဒီက နောက်ထှာ .. အဟီးဟီး
တရားပြသလိုလိုနဲ့ကိုကြေးအိုးကို ဖဲ့ထလိုက်တာလားဗျာ..
ဗိုက်ကလေးနော် .. အောက်ဆီဂျင်မလုပ်နဲ့ …
အားရပါးရရေးပြီးမှ .. ညနေသူ စာဝင်ဖတ်တတ်တာ သတိရသွားလို့ .. ပြန်လည်း မဖျက်ချင်တော့တာနဲ့ ….. ဟီးဟီး … ဟိုစကားပုံလိုပေါ့ .. ဘာတဲ့ … ရန်ဖြစ်လေ ပိုချစ်လေဆိုလားပဲ … ။
(လူမြင်သူမြင်ပေါရတာ ရှက်ထှာအေ … ဟွန့်)
ကောင်မလေးရေ….. ငါနင့်ကိုအရမ်းလွမ်းနေတယ် ငါနင့်ကိုအရမ်းချစ်နေတယ် ငါနင့်ကိုအရမ်းတွေ့ချင်နေတယ် ခုချိန်မှာငါနင်နဲ့အနီးဆုံးနေရာမှာ ရှိနေခွင့်ရမယ်ဆိုရင်တောင် မဖြစ်နိုင်တော့ပြီမို့ ငါ့ဘဝငါ့နှလုံးသားငါ့ခံစားချက်တွေ အားလုံးဟာငါနဲ့အတူ ရုပ်ဒြပ်မရှိတဲ့ လေထုထဲမှာ မျောလွင့်လို့နေခဲ့ပြီလေ နောက်ဘဝဆိုတာများ ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ ကောင်မလေးရေ ငါဆုတောင်းခဲ့ပါတယ် ထာဝရမင်းဘေးမှာ မင်းစိတ်တိုင်းကျ မင်းအလိုကျ မင်းစိတ်ချမ်းသာအောင် ထားနိုင်မယ့်ချစ်သူတယောက်ဖြစ်ရပါစေလို့ ငါဆုတောင်းခဲ့ပါတယ် ကောင်မလေးရေ……
ချစ်သူ ဘယကိုများထွက်သွားလို့ လဲဗျာ။
ကိုယ့် ဆွဲကြိုးလေး တွေ ကို